खजुरामा मिनि रंगशालाको शिलान्यास « News of Nepal
खजुरामा मिनि रंगशालाको शिलान्यास
२७ बैशाख २०७६, शुक्रबार
कुमार श्रेष्ठ, बाँके
खजुरा गाउँपालिका वडा नं. ४, डीगाउँको आदर्श आधारभूत स्कूलको फुटबल मैदानलाई मिनि रंगशालाको रुपमा विकास गरिने भएको छ । पहिलो चरणमा ४५ लाखको लागतमा शुरु गर्न लागिएको प्यारापिटको बुधबार खजुरा गाउँपालिकाका प्रमुख किस्मतकुमार कक्षपतिले शिलान्यास गरे । प्रदेश सरकारको ३६ लाख र गाउँपालिकाको ९ लाख रुपैयाँ बजेटमा प्यारापिट निर्माण शुरु गरिएको हो ।
खजुरालाई खेलकुदको हब बनाउने उद्देश्यले खजुरा गाउँपालिकाभित्र धमाधम खेलकुद संरचना निर्माण भइरहेका छन् । प्यारापिट १४६ मिटर लम्बाई र तीन स्टेप रहने वडा अध्यक्ष तिलकवीर सुनारले जानकारी दिए ।
आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लिग चरणको फुटबल खेल उक्त खेलमैदानमा खेलाइएको थियो । एक वर्षअघि नेपालगञ्ज गोल्डकप पनि यही मैदानमा खेलाइएको थियो । खजुरा क्षेत्रमा हुने फुटबलका प्रतियोगिताहरु यहाँ हुने गर्दछ ।
खजुरा गाउँपालिकाको चौथो गाउँसभालले सो ठाउँमा मिनी रंगशालाको रुपमा विकास गर्न सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको थियो । गाउँपालिकाका प्रमुख कक्षपतिले खजुरालाई खेलकुदको हब बनाउन खेलपूर्वाधारमा लगानी गरिएको बताए ।
शिलान्यास कार्यक्रममा क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति प्रदेश नं. ५ का अध्यक्ष भीम वली, खजुरा गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बमबहादुर केसीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
खजुरामा भलिबल स्टेडियम बनिरहेको छ । जहाँ आठौं राष्ट्रिय खेलकुदको भलिबल प्रतियोगिता भइसकेको छ । नेपालगञ्जलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर भएको आठौं राष्ट्रियले ५० करोडबढीको पूर्वाधार निर्माण गरेको छ । आठौंमा खजुरामा चार वटा खेल भएका थिए ।
“एनएमबि बैंक अरू बैंकभन्दा फरक किसिमले अगाडि बढेको
शैक्षिक सुधार कोष ३ अर्ब ७३
महिला लिग फुटबलमा चौदण्डीगडी र चन्द्रपुर
पूर्वाधारसंगै खेलाडी उत्पादनमा जोड
आस्था प्रकरण : सोर्सफोर्सको प्रभुत्व शिष्टताको अपहरण
६८ लाख अनलाइन ठगी गर्ने ८..
सापकोटाविरुद्धको विवरण ३० दिनभित्र पठाउन आदेश
एमसीसी संसद्मा प्रवेश
विदेशमन्त्री जेन आज आउने
मोटरसाइकल दुर्घटनामा गयो शिक्षकको ज्यान
बाक्लो हुस्सूका कारण ट्रक ठोकिँदा तीनको मृत्यु
अखिलका विद्यार्थीबीच झडप
शहरीकरण र भू–उपयोग परिर्वतन सम्बन्धमा नासाको चासो
अढाइ तोला सुनका लागि महिलाको हत्या